Mandalas🥇 Mandalas.wiki မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
Mandalas ၎င်းတို့သည်လူများစွာကိုစိတ် ၀ င်စားစေပြီးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအမှန်တကယ်ယူဆောင်ပေးသောဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာစက်ဝိုင်းပုံသဏ္inာန်၌ပုံဆွဲခြင်းသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်။
mandalas ၏ပထမဆုံးမှတ်တမ်းများသည်တိဗက်ဒေသရှိ ၈ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများကဲ့သို့အရှေ့ဘက်အခြားနိုင်ငံများ၌လည်းပျံ့နှံ့နေသည်။ နေရာဒေသအားလုံးတွင် mandala ဟူသောစကားလုံးသည်aSanskrit မှဆင်းသက်လာဟူသောအသုံးအနှုနျး စက်ဝိုင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများသို့မဟုတ်ဘာဝနာစဉ်အာရုံစူးစိုက်မှုပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာဒီနေ့ခေတ်အထိဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီရှေးဟောင်းအနုပညာသမိုင်းကိုလေ့လာပြီးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိစေမလဲဆိုတာလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ရှာတွေ့ဖို့အတော်လေးဘုံဖြစ်သောကြောင့် libros အတွက် အရောင်နှင့်တက်တူး မတူညီသောမန္တလေးအမျိုးအစားများကိုကိုယ်စားပြုသည်။
မင်ဒဲလားသည် Sanskrit ဘာသာစကားမှစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေပြီဟုယူဆပြီးစက်ဝိုင်းကိုဆိုလိုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူယနေ့ပင် Sanskrit သည်အိန္ဒိယ၏တရားဝင်ဘာသာစကား ၂၃ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်၎င်း၏အရေးပါမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် mandalas ၏ဒီဇိုင်းများဖြစ်ကြသည် အာရုံစူးစိုက်မှုဂျီ ometric မေတြီပုံစံမျိုးစုံ ။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်စင်တာတစ်ခုတည်းမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့ ဦး စွာမှစ။ , ပန်းချီကားများကိုခေါ်ကြသည် ရန်အောင် တူရိယာအတွက် Hindustani ကျွန်းဆွယ်တွင်ပြောသောဘာသာစကားများမှဆင်းသက်လာသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ဒါက mandalas ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းတို့သည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားရှိရန်ဖြစ်သည်။
ဤသည်ရည်ရွယ်ချက်မှာသူတို့လေ့လာတွေ့ရှိသည့်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအရပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အများစုတွင်မန္ဒြာသည်တရားအားထုတ်ခြင်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံစံများပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှု, ဒါပေမယ့်အစွမ်းကုန်အရေးပါမှု၏ပုံဆွဲ၏ဆောက်လုပ်ရေးသာဖြစ်ခြင်း။
ပုံစံမျိုးစုံကိုအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းအရောင်အသွေးစုံသည်။ mandalas ဖန်တီးရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် ရောင်စုံမှင်၏ စက္ကူသို့မဟုတ်ပတ္တူပေါ်မှာ။ သို့သော်အချို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသည်သံနှင့်သစ်သားဖြင့် mandalas များပြုလုပ်သည့်အစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချို့သောဘုရားကျောင်းများတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများမှပြုလုပ်သောအထူး mandalas များကိုဖန်တီးရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ဤဘုရားကျောင်းများ၌သံksာတော်များသည်မန္တာရာများဖန်တီးခြင်းအနုပညာကိုလေ့လာခဲ့ကြသည် ရောင်စုံသဲ နှစ်တာကာလအတွင်း. ပုံဆွဲရန်အချိန်နာရီသို့မဟုတ်ကြာနိုင်ပါသည်။ ပုံဆွဲပြီးသောအခါချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။ သို့မှသာမြစ်ထဲတွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုသုံးသည်။ ဤအနုပညာသည်ဘဝရှိအရာအားလုံးသည်ခဏသာဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားပြုဖော်ပြသည်။
mandalas ၏ဖန်တီးမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်တမ်းများကိုပြန်စတငျ ၈ ရာစုတိဗက်တည်ရှိရာဒေသဖြစ်သည် ။ အစကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရား၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တရားအားထုတ်ရန်အထောက်အကူအဖြစ်ပုံဆွဲခြင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အလားတူကာလများ၌အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဂျပန်၌ဗုဒ္ဓဘာသာသာမက၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် Taoism တွင်လည်း mandalas များကိုတွေ့ရသည်။ yin နှင့် yang သင်္ကေတများသည် mandala ဖြစ်သည် ။
သို့သော်ဘာသာတရားအားလုံးကရုပ်ပုံများကိုတစ်စုံတစ်ခုအဖြစ်သဘောထားကြသည် မြင့်မြတ် မကြာခဏဘဝစက်ဝိုင်းကိုကိုယ်စားပြုသော။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏အချို့သောရှုထောင့်များတွင်မန္ဒြာများကိုနတ်ဘုရားများ၏နန်းတော်များအဖြစ်ကိုယ်စားပြုပြီးမြင့်မြတ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးတရားဝင်မှတ်တမ်းများကိုအရှေ့မှရရှိခဲ့သော်လည်းအမေရိကန်တိုက်ကြီးမှလူများသည်ဓလေ့ထုံးစံများ၌အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာဂျီ ometric မေတြီပုံစံများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာနှင့်ဆက်စပ်သောအစွန်းရောက်၌တည်၏။ ၁၆ ရာစုမှ ၁၈ ရာစုအတွင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ပန်းချီကားများကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည် သန့်ရှင်းသောအနုပညာနှင့်စွန်းဖန် importantes အဆောက်အဦးများ .
တချိန်တည်းမှာပင်ရာနှင့်ချီသောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပစ္စည်းများကိုအသွင်ပြောင်းရန်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာနေသည့်နေရာတွင် alchemy ဟူသောအတွေးသည်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ မင်ဒဲလားကိုလည်းထိုအချိန်ကထည့်သွင်းခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအချိန်ကရေးထားသောပန်းချီကားများသည်ထိုအချိန်ကရေးသားထားသော hermet text များ၌ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူအနေဖြင့်ယနေ့ထိတိုင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသောပန်းချီကားများကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည်ကိုအမြဲတစေစိတ် ၀ င်စားကြောင်းအမြဲတမ်းသိထားကြသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Sanskrit စကားလုံးမှ mandala ဟူသောစကားလုံး၏စာသားအတိုင်းပြန်ဆိုချက်သည်၊ အဝိုင်း။ ဤစက်ဝိုင်းကိုရာစုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့သည် ဘဝ၏ကျမ်းပိုဒ်၏ကိုယ်စားပြုမှု သို့မဟုတ်ကြည်ညိုလေးမြတ်ခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းသောနတ်ဘုရားများ၏နန်းတော်ပင်။ သို့သော်၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဥပမာ - ဟိန္ဒူဘာသာတွင် mandalas များသည်စကြာ ၀ ofာ၏ပုံစံများနှင့်အညီသက်ရှိများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤတွင်သူတို့သည်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးတွင်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသူတို့ကအင်အားကြီးတယ် တရားအားထုတ်ခြင်းတူရိယာ သူတို့ပုံသဏ္andာန်နှင့်အရောင်များကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်အဖြစ်။ ဘာသာတရားတွင်၎င်းတို့သည်သဲများနှင့်နတ်ဘုရားများနေအိမ်များဖြင့်ပြင်ဆင်ချိန်၌အသက်တိုတောင်းခြင်းကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
Taoist ယဉ်ကျေးမှုတွင် yin yang အတွေးအခေါ်သည်မင်ဒဲလား၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်စားပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီနေရာတွင်သင်္ကေတနှစ်ခု၏ပေါင်းစည်းမှုသည်တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဘဝကဏ္ aspects အားလုံးတွင်ထိန်းသိမ်းထားရမည့်ချိန်ခွင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်မီကမြို့များတွင်ကုသခြင်းဆိုင်ရာအခမ်းအနားများတွင်ထိုပန်းချီကားများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုပြသခဲ့သည်။
ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း mandalas ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသောလူတစ် ဦး ၏ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်သုခချမ်းသာစသည့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဒီနေရာမှာအဓိက mandalas အမျိုးအစားများနှင့်သူတို့အဘို့အဘယ်သို့ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။
သဲ mandalas တိဘက်ဘုန်းကြီးများအကြားအစဉ်အလာရှိပါတယ်။ ဤအနုပညာတွင်ပန်းချီကားများကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်သဲများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတွင်ရိုးရာအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သဲ mandalas များကိုမစတင်မှီသံ,ာတော်များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနည်းစနစ်များကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ကြိုတင်တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်သည်ပြင်ဆင်ရန်အချိန်ယူရပြီးနောက်ဆုံးတွင်အရာရာကိုမြစ် (သို့) အခြားရေအရင်းအမြစ်များထဲသို့စွန့်ပစ်သွားသည်။
စိတ်ကူးသည်ကိုယ်စားပြုရန်ဖြစ်သည် ဘဝအပေါငျးတို့သရှုထောင့်၏တိုတို အရာအားလုံးတစ်နာရီအတွင်းကျော်ဖြစ်လိမ့်မည်ကတည်းက။ ဒီသဘောနဲ့သူတို့ဟာအသစ်တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုတယ် စတယ် ဒါကြောင့်အသစ်တစ်ခုကိုသဲဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်အမြဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာ၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာသစ်သားသို့မဟုတ်သံကဲ့သို့သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော mandalas များဖြစ်သည်။ ဤတွင်သူတို့သည်သုံးဖက်မြင်ပုံစံများကိုယူပြီးယေဘူယျအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည် အချို့သောဘုရားများ၏အိမ်၏ကိုယ်စားပြုမှု။
သူတို့ကအစကျယ်ပြန့်လက်ဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဓလေ့ထုံးစံအမျိုးမျိုးနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများအရအုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်စုံတစ် ဦး ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်မန္ဒလာကိုလက်ခံခြင်းသည်ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဟိန္ဒူထုံးတမ်းစဉ်လာအရပန်းချီကားများကိုဘုရားကျောင်းနှင့်အခြားသန့်ရှင်းသောနေရာများတွင်တွေ့ရသည်။ ဤနည်းစနစ်များတွင်တောက်ပသောအရောင်များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည် အမျိုးမျိုးသောကိုယ်စားပြုသည် Chakra ကိုယ်ခန္ဓာ၏ လူ့။ ဟိန္ဒူထုံးတမ်းစဉ်လာအရသူတို့သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့သွားသောစွမ်းအင်စင်တာများနှင့်တူသည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ပန်းချီကားများတွင်အသုံးပြုသောအရောင်များ၏အရောင်သည်ဤ Chakra များအားပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လည်ပတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသက်တာ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုသေချာစေသည်။
အိမ်မှာ mandala ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲ?
အနုစိတ်ရောင်စုံဖြူဖွေးသောမန်ဒယ်လာများကိုဖန်တီးရန်ဘုန်းတော်ကြီးများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့ကျင့်မှုဖြင့်ဤမျှလောက်အလုပ်မပါဘဲ, ဒီအနုပညာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစုပ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်၊ သင်သည် YouTube ပေါ်ရှိရိုးရှင်းသောအကြံဥာဏ်များနှင့်ဗီဒီယိုများပင် လိုက်၍ သင်၏ပုံသဏ္drawာန်ကိုဆွဲနိုင်သည်။
ပထမဆုံးအားဖြင့်၊ သင်သည်စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းဆွဲရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် mandala စာသားအရ "circle" ကိုဆိုလိုသည်။ ပုံဆွဲခြင်းသည်တတ်နိုင်သမျှပြီးပြည့်စုံမှုရှိရန်သတိပြုရမည် သံလိုက်အိမ်မြှောင် ဒါမှမဟုတ်ပန်းကန်တစ်ခု။ သို့မှသာရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စက်ဝိုင်းကိုခြေရာခံပြီးသင်အလယ်ကိုရှာပြီးမျဉ်းကြောင်းဆွဲရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးရင်နောက်ထပ်မျဉ်းဖြောင့်ဆွဲပြီးသင်လုံလုံလောက်လောက်မရှာမချင်းဆက်လုပ်ပါ။ ဤသည်မှာသင်ဖန်တီးလိုသော mandalas အားလုံးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ထိုနေရာမှသင်၏စိတ်ကူးကိုသာသုံးပါ၊ လေးများ၊ ပန်းများ၊ ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများနှင့်စကားလုံးများကိုပင်ထည့်ပါ။
ဒါပေမဲ့သတိရရမယ်၊ သူတို့တွေဟာမင်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ရှိရမယ်။ မင်းအဲဒီ့ထုတ်လုပ်မှုကိုသင်လုံးလုံးလျားလျားမြှုပ်နှံရမယ်။ ပုံဆွဲပြီးသည်နှင့်တောက်ပ။ တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်အရောင်ခြယ်ပါ။
Mandalas အရောင် color
မင်ဒဲလားသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အဆင်သင့်သောပန်းချီကားများနှင့်ရောင်စုံစာအုပ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဤနည်းဖြင့်လူများစွာသည်နေ့စဉ်ပြproblemsနာများမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်သည်။ သင့်တွင်ကိုယ်ပိုင် mandalas များဖန်တီးရန်အချိန်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါကအိမ်တွင်သင်ပုံနှိပ်။ ပန်းချီဆွဲနိုင်သည့်ပုံအချို့ရှိပါသည်။ ထွက်ခွာသည်။
ဟုတ်ကဲ့, mandalas အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ရာစုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးသူတို့အမှန်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ၎င်းနှင့်အတူပန်းချီကားသည်ပန်းချီကားများကိုလျှော့ချနိုင်သည် စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု ။ ထို့ကြောင့်ဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ပံ့ပိုးသည်။
mandalas နှင့်ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်တစ်ခုမှာသူတို့သည်သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးဘက်လိုက်မှုကြောင့်သူတို့သည်ဗဟုသုတရလိုသူတိုင်းကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဝါသနာအသစ်တစ်ခုကိုသာလိုချင်သူများအတွက်သူတို့သည်ပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့်ပန်းချီဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။